khabarmuluk.com | Trusted Online News Protal in Nepal किन बारम्बार हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि ? के हुन् समाधानका उपाय ? – khabarmuluk.com
फागुन २१,२०७७ – संजोग सिवाकोटी
लगातारको मूल्यवृद्धिले माघ ५ मा प्रति लिटर ११० रहेको पेट्रोल र ९३ रहेको डिजेलको मूल्य ६ रुपैयाँ बढेर हाल क्रमशस् रु ११६ र रु ९९ पुगेको छ भने नयाँ मूल्य समायोजन बमोजिम मट्टितेल प्रति लिटर रु ९९ र खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिण्डर रु १४०० र हवाई इन्धन प्रति लिटर रु ७२ पुगेको छ । गत वर्ष मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको निगमले किन लगातार मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ ?
नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवम् इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा आधारित हुन्छ । मुख्यतस् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वतस् मूल्यवृद्धि हुने गर्छ ।
नेपालले भारतको इण्डियन आयल कर्पोरेसन ९आईओसी० सँग इन्धन खरिद गरेर मुलुकमा बिक्री वितरण गर्छ । त्यसैले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले तय गरेकै मूल्यमा आधारित हुन्छ । नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँगै आईओसीको मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ । आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई हरेक १५ दिनमा नयाँ समायोजित मूल्य पठाउने गर्दछ र त्यसैअनुरुप नेपालले पनि आवश्यकता अनुरुप मूल्य समायोजन गर्दछ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर नरहने भएतापनि यसमा विभिन्न शिर्षकका करहरु तोकिएका छन्।
चालू आव ०७७/७८ को बजेट अघि पेट्रोलमा १५.२० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा २–२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क थियो भने बजेट मार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो । यो उच्च कर वृद्धि सँगै पेट्रोलको भन्सार शुल्क २५।२ रुपैयाँ भएको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको भन्सार शुल्क रु १२-१२ भएको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निगमबाट करबापत ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । भारी कर लगाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरकारले उठाएको करहरु परिचालन गरी पुनर्मूल्यांकनको योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारले त्यस्तो कुनै योजना बनाएको छैन।
इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै किन अन्य वस्तुको भाउ बढ्छ?
इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्तालाई मार नपरोस् भनेर बनाइएको मूल्य स्थिरिकरण कोष यतिबेला प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । “नाफा भएको बेला राखेको पैसाबाट जनतालाई राहत दिनुपर्यो,” उनले भने, “त्यस्तै पूर्वाधार कर पनि प्रयोग गरिएको छैन । जनता अप्ठ्यारोमा छन्। त्यसलाई घटाउने वा हटाउने तर्फ सोच्नुपर्छ ।” ( साउथ एसिया चेक डट् ओआरजि बाट )
प्रकाशित मिति:फागुन २१, २०७७